[1080p 30 the RENGUVA HD]: uine 1080p azere HD uye 12M mufananidzo kwemupfungwa, kuti GJT chiito kamera inoita kuti kutora yepamusoro mavhidhiyo uye mifananidzo. [KUNOFANIRA-IN Wi-Fi & HDMI Output]: Just kukopa App 'Ez iCam' iri pafoni yako kana piritsi uye anobatana ichi chiito kamera, ipapo unogona kutora C ...
[1080p 30 the RENGUVA HD]: uine 1080p azere HD uye 12M mufananidzo kwemupfungwa, kuti GJT chiito kamera inoita kuti kutora yepamusoro mavhidhiyo uye mifananidzo.
[KUNOFANIRA-IN Wi-Fi & HDMI Output]: Just kukopa App 'Ez iCam' iri pafoni yako kana piritsi uye anobatana ichi chiito kamera, ipapo unogona kutora kuzvidzora yako akangwara mano, The Wi-Fi pasiwedhi iri '1234567890 'uye chiratidzo yemakomo kusvika 10 mamita.
[Isapinda UP TO 30M]: With yakasimba isapinda kwedzimba, unogona svetuka mumvura pasi 30M. Perfect mvura mitambo, yakadai nokushambira, Diving, Surfing uye zvichingodaro.
[Dual Screen]: Dual Mini chidzitiro uye 0.82 padiki ultrathin ukobvu, izvo zvinoratidza mabhatiri uye modes chinzvimbo uye zviri nyore kuti tione zvemitambo kamera oparesheni. The 2.0 padiki mukuru tsanangudzo LCD chidzitiro anogona kuratidza uye vaone mavhidhiyo uye mapikicha zvinobudirira.
[Multiple Kunowedzera AND ACCESSORIES]: Anouya boka rinonakidza mirwi yokurwa uye nenhumbi, zvichiita kamera iripo kupfura marudzi mazhinji mitambo, yakadai kuchovha, motorcycling, kutyaira, kumhanya, kukwira, Diving, Skiing uye snorkeling etc.
720p isapinda Action Camera
Action Camera Dvr Ngowani
Action Sport Ngowani Camera
Action Sports Ngowani Camera
Yakachipa pashiri 4k Action Camera
Ngowani Sport Action Camera